Blockchain ndiyo inonyanya kukanganisa bhizinesi rekutengesa cheni chikamu. Iyi tekinoroji, iyo yave iripo muchimiro chingangoita sengano kwemakore, ikozvino yasvika padanho rekushomeka; Mhedzisiro ye blockchain inozonzwika nebhizinesi rega rega richipa masevhisi kana kutakura zvinhu zvepanyama pamapuratifomu akawanda. Blockchain, iyo yekupedzisira kuvimba, ndiyo tekinoroji yepasi inozoshandura zvachose maindasitiri ese, vese vatori vechikamu pamwe nemaitiro acho. Nyanzvi dziri kufungidzira kuti blockchain ichavhiringidza iyo cheni yekutengesa chikamu muna 2018 nekupfuura. Iyi tekinoroji yakave iriko kwemakore, asi ikozvino yavepo kune chaiyo poindi yekugona. Kukanganiswa kweBlockchain kunonzwika nebhizinesi rega rega richipa masevhisi kana kutakura zvinhu zvepanyama pamapuratifomu akawanda.
Zvichida imwe nzvimbo yakakosha yekudyidzana kwemaindasitiri akadaro iri kuburikidza ne blockchain hubs. Iko kune nhamba hombe ye blockchain kutanga inobatirana kuitira kuchinjisa hunyanzvi hwehunyanzvi uye kuvaka mamodheru emabhizimusi matsva - nokudaro zvichideredza zvese mari yekuvandudza uye nguva yekuvandudza yezvavanoshandisa.
Blockchain ndiyo Resilient Glue iyo inotonga kwete chete dhata dhata, asi masisitimu emari, futi. Iko masisitimu enhaka akagadziridzwa kugadzirisa imwe, asi echinyakare bhizinesi mamiriro anogona kudikanwa nyowani, yakawanda-yazvino tekinoroji mhinduro; blockchain inogonesa vatengi uye vanobatira zvakafanana kuti vafare kuvepo. Kune emabhizinesi anotenga zvinhu kana masevhisi, blockchain inobatsira manejimendi manejimendi manejimendi. marongero ezvokutengeserana anokurudzirwa ne blockchain inowanisa kutengeserana kwakanaka. Saizvozvo, kumakambani ari kuwana kana kutenga masevhisi, blockchain inogonesa kunyorera kwakasungirirwa kune asingachinjiki, asingachinjiki madhigi kusangana zvinowirirana zvehutongi zvinodiwa kune avo vese vane chekuita uye masisitimu. Izvi zvinoshandura nzira yekutengesa nekugonesa kubhadhara nenguva invoice uye kubhadhara pakati pevatori vechikamu mukutengeswa, kupa kuchengetedzwa kwakachengeteka uye kwakaringana kwezvinhu nemasevhisi mukati mese. eMarketer yekutanga ongororo ye blockchain mari inoratidza kuti kugamuchirwa kwe blockchain kuchamhanyisa sezvo makambani aona kuti humbowo hwepfungwa hwakatogadziridzwa. Blockchain + tekinoroji iri kubuda iyo inobata vimbiso yekushandura mashandiro emaketeni anoshanda nekukanda mubhenefiti ye blockchain uye neayo tekinoroji yedhijitari. Blockchain yakadaro inogona kupa nzira nyowani nyowani yekupa mari cheni, iyo inogona kudzikisira mitengo, kugadzirisa mashandiro, uye kufambisa kugadziriswa kwekutengeserana pakati pemapato anobatanidzwa mukutenga. eMarketer yekutanga ongororo ye blockchain mari inoratidza kuti kugamuchirwa kwe blockchain kuchamhanyisa sezvo makambani aona kuti humbowo hwepfungwa hwakatogadziridzwa.